देशकै पुरानो होमस्टे व्यावसायिक बन्दै, सूर्योदय हेर्नकै लागि जान्छन् डेढ लाख | Makalukhabar.com
देशकै पुरानो होमस्टे व्यावसायिक बन्दै, सूर्योदय हेर्नकै लागि जान्छन् डेढ लाख
राष्ट्रलाई चिनाउने तथा पर्यटन भित्र्याउने उपायहरु दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको समयमा पुर्वी नेपालको पर्यटकीय स्थल ईलामको श्रीअन्तुमा करिब एघार वर्षअघि ४–५ घरले होमस्टे (घरबास) ब्यवसाय सुरु गरे । अहिले सोही पर्यटन ब्यवसाय त्यहाँका ४२ घर परिवारको जीवन चलाउने माध्यम बनेको छ त्यो पनि एकाविहानै झुल्किने सूर्योदयको कारण ।
ईलामको श्रीअन्तुमा पत्रकार महासंघ १ नं प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको क्रममा सयौं पत्रकार त्यहाँ पुगे । सोही क्रममा सबैले आ–आफना ढंगबाट चर्चा परिचर्चा गरेपनि सुनसरीका पत्रकारको बुझाईमा भने परक रहयो । गत शुक्रबार श्रीअन्तु स्थित अर्जना होमस्टेमा रातभरी गफ गरेर विताएका सुनसरी पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ भन्छन् ‘देशको बिकास गर्नु छ भने आन्तरिक पर्यटक नै चाहिन्छ ।’
ईलामको सुर्योदय नगरपालिका वडा नं ५ मा जतिखेर तत्कालीन सरकारले होमस्टेको अवधारणा ल्यायो त्यही बेलादेखि इलामको श्रीअन्तुमा होमस्टे शुरु भएको हो ।
२०६५ सालमा अन्तुडाँडामा होमस्टे शुरु गर्दा समावेशी ढङ्गले शुरु गरिएको अन्तुडाँडा सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष धनकुमार आलेले बताए । होमस्टेलाई समावेशी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार आले, लगायत सोही गाउँका ५ घरले होमस्टे सञ्चालन गरे ।
उनले होमस्टे स्थापना गर्दा सूर्योदय नगरपालिका–४ र ५ का एकराज घिमिरे, टेकबहादुर आले मगर, देव प्रधान, राम घिमिरे र अनु तामाङले पनि होमस्टे सुरु गरेका थिए ।
विशेष गरी कात्तिक, मङ्सिर र पौष महिनामा श्रीअन्तु डाँडाबाट सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । श्रीअन्तुबाट हेरिने सुर्योदय काठमाडौं नगरकोटबाट भन्दा पनि आकर्षक छ । श्रीअन्तुका स्थानीयले यहि सूर्योदयलाई आधार बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धन गरिरहेका छन् ।
अहिले सालाखाला वर्षमा पचार हजार बढि आन्तरिक बाह्य पर्यटक सुर्योदय हेर्न श्रीअन्तु पुग्ने गरेका छन् ।
होमस्टेको सञ्चालनको शुरुवाती क्षणमा पाहुनालाई खानाको परिकार भने जस्तो बनाउन नसक्दा होमस्टे सञ्चालकलाई सारै सकस पर्यो । ‘आइडिया थिएन, गाउँघरको जस्तो गरी खाना दिँदा पाहुनाहरुले रुचाउनु भएन ।’ अर्चना होमस्टेका सञ्चालक अनु तामाङले बताइन् । ‘पछि पाहुनालाई कस्ता परिकार दिने, कसरी स्वागत सत्कार गर्ने भनेर जानकारी हासिल गर्दै गइयो । अहिले कुनै समस्या छैन ।’
होमस्टे भन्ने बित्तिकै घरमा जे पाक्छ पूर्व तयारीबिना नै ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने भएकोले परम्परागत र अर्गानिक हुन्छ । ‘हामी गाउँघरकै परिकार पस्कन्छौं, टिपिकल खानेकुरा भएपछि पाहुनापनि दंग पर्छन् ।’ अनु तामाङ भन्छन् ।
शुरुमा जस्तो पाक्यो, त्यस्तै दिने र खानेले पनि जस्तो दिए पनि खाने गरेपनि पछिल्लो समय ग्राहकको रोजाइ अनुसारको मौलिक अग्र्यानक परिकारहरू समेत यहाँ पाइन्छ । अनुका अनुसार शुरुमा खासै कमाइ नभए पनि ५ वर्ष यता हरेक महिनामा खर्च कटाएर सरदर ७० हजारदेखि १ लाखसम्म आम्दानी भइरहेको छ । सिजनको बेलामा हरेक होमस्टेले मासिक लाख रुपैयाँ सहजै कमाउने गरेको अनु तामाङको अनुभव छ । ‘आजकल नेपालीहरु पनि फुर्सद भयोकी नयाँ ठाउँमा घुम्न र बस्न रुचाउँछन्, हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको बाह्य भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक नै हुन् ।’ उनी भन्छिन् ।
श्रीअन्तुका होमस्टेमा कोदोको रोटी, ढिँडो, फापरको रोटी, जडीबुटी मिसाएको (स्याल) को तीनपाने, सिस्नुको तरकारी, मकैको भात, गुन्द्रुक, सिन्की, सिजनअनुसार लेकमा पाइने तरकारी, लोकल भाले, लेखको कालो बङ्गुरको मासु खान पाइने दिनेश होमस्टेका सञ्चालक कुसुम आलेले बताइन् ।
२०७० सालदेखि तीनभाइ दाजुभाइ सुरेश आले, कुमार आले र दिनेश आले मिलेर छुट्टाछुट्टै रूपमा आलेटोलमा सञ्चालन गरेको होमस्टे राम्रैसँग चलेको छ । पाहुना आएनन् भन्ने पीर यहाँका होमस्टे सञ्चालकलाई छैन । त्यसमाथि केहि वर्षयता होमस्टेमा ग्राहकको रोजाइ अनुसारको सेवा सुविधा थप गर्दै ब्यवस्थित र सुविधाजनक बनाएपछि आगन्तुकहरुको संख्या बढ्दो छ । सेवा अनुसार आम्दानीपनि बढेको कृषा होमस्टेका सञ्चालक कुमार आलेले बताए । ‘सुरुसुरुमा हामीलाई कसरी स्वागत गर्ने, परिकार कस्ता दिने कसरी पकाउने भन्नेमै चिन्ता थियो, विस्तारै सिकिँदै गइयो ।’ उनी भन्छन् ।
होमस्टेमा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूका लागि मनोरञ्जन र त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरूको जानकारीको लागि सूचना केन्द्रसमेत अन्तु भन्ज्याङ्गमा स्थापना गरिएको छ । सम्भव भए हरेक साँझ नभए साताको दुई दिन शुक्रबार शनिबार भन्ज्याङ्गमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ । जहाँ तामाङ डम्फु सेलो, मगर जातिको हुर्रा नाच र राई जातिको साकेला नाच प्रदर्शन गरिन्छ ।
श्रीअन्तुबाट सूर्योदय हेर्न भारतको दार्जलिङ, सिक्कीम, आसाम देखि विहारबाट समेत बाह्य पर्यटक आउने गर्दछन् । आन्तरिक पर्यटक महाकालीसम्मका आउँछन् । सिजनका बेला विदेशी पर्यटकहरूको घुँइचो पनि लाग्छ । यातायातको सुगमता, इलामको चियाबारीले श्रीअन्तुको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याएका छन् । फिक्कल आउने पर्यटकले एक दिनको समय लम्ब्याएर यहाँ आउँदो सुर्योदयको अनुपम दुश्यावलोकन गर्न सक्छन् ।
यहाँका होमस्टेमा हरेक महिना सरदर २ सयभन्दा बढी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक आउने गरेको सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वार्षिक अन्तुडाँडा होमस्टेमा १ लाख, ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको सञ्चालक दिनेश आले बताए ।
इलामका प्रसिद्ध ६ अ अर्थात अलैंची, अदुवा, अर्थोडक्स चिया, अकबरे खुर्सानी, ओलन (दुध), अम्लिसो, आलु र अतिथि सत्कार हुन्छ । श्रीअन्तुले होमस्टेमा आउने पाहुनालाई यीनै ६ अ ले स्वागत सत्कार गर्दछन् । कतिले अकबरे खोर्सानी, अर्थोडक्स चिया, अलैंची, अदुवा अम्लिसो कोसेली समेत लैजाने गर्दछन् ।
श्रीअन्तु डाँडामा जस्तै अन्यत्र पनि यसरी नै होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो ।
नाप्ने ताैलने उपकरण नविकरण नगर्ने साँढे दुई हजार ब्यापारी कारवाहीमा परे
रक्सी भन्दा चुरोट पिउनु बढी खतरनाक
भाद्र २७ । चुरोट वा रक्सी कुन चाँही बढी हानिकारक होला स्वास्थ्यका हिसावमा ? सेवनकर्तालाई प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरुको आ–आफ्नै खाले जवाफ हुन सक्छ ।एउटा अनुसन्धानले एक सातामा ७५० मिलिलिटर रक्सी पिउँदा सोही अवधिमा महिलाले १० र पुरूषले ५ वटा चुरोट पिउँदा बराबरकै क्यान्सरको खतरा उत्पन्न हुने देखाएको बीबी... जारी राख्नुहोस...
जनवरी महिनामा जन्मने यस कारण उत्कृष्ट पार्टनर
भाद्र २५ । हरेक व्यक्तिलाई राम्रा साथी र पार्टनरको आवश्यकता हुन्छ । यदि तपाईंका कोही साथी वा पार्टनर जनवरीमा जन्मिएका छन् भने तपाईंलाई भाग्यमानी भन्नैपर्छ । जनवरीमा जन्मिएका मानिसहरु अत्यधिक सकारात्मक, ऊर्जावान् र ठट्टा गर्नुपर्ने किसिमका हुन्छ । यो महिनामा जन्मिएका मानिसहरु राम्रा पार्टनर वा साथी ह... जारी राख्नुहोस...
भाद्र २४, काठमाडौं । वि.सं. २०७२ सालको अन्तिमतिर तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेलसँगको भेटमा साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेले आफ्ना लागि आवास (घर) बनाइदिन आग्रह गरिन् । आवास भए सिर्जना कोर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । झमकको आग्रह लगत्तै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केप... जारी राख्नुहोस...
डेंगु नियन्त्रणमा लाचार सरकारलाई सहयोग किन नगर्ने ?
मुलुकभर डेंगुको महामारी फैलिइरहँदा राज्य संयन्त्र बेखबर बनी रहेको छ । पूर्वी नेपालको धरानबाट ३ महिना अघि देखापरेको डेंगु अहिले तराईका जिल्लासँगै राजधानीमा समेत महामारीको रुप लिन थालेको छ । सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि अपनाएको अभियान निरर्थक बन्दै गएको छ । ३ महिला अधि सुनसरीको धरानमा देखापरेको डेंग... जारी राख्नुहोस...
भाद्र २३, काठमाडौं । आज भोलि हरेक मानिसको हात–हातमा ई–सिगरेट देखिन्छ । मानिसहरुमा यो फेसनकै रुपमा विकसित भएको पाइन्छ । अझ धुम्रपानका लत लागेकाहरु ई–सिगरेटको हानी कम हुने विश्वासमा यसको प्रयोग गरिरहेका पाइन्छ । यसमा पनि विषाक्त रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिने भएकाले यसको लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नहुने व... जारी राख्नुहोस...
नाफामा पाएको जिन्दगी सम्झँदै राधा भन्छिन्–‘मृत्युसँग हारेको मानसिकता सार्है विघटनकारी हुँदोरहेछ’
प्रिय पाठकहरु !यो पत्र पढेपछि तपाईहरुको मनको तलाउमा पनि ज्वारभाटा उठ्ने छ । भावनाका उत्ताल छालहरू छचल्किने छन् । शब्दमा भए पनि आज म तपाईहरुसँग बेस्सरी पोखिन चाहन्छु । म चाहन्छु, मेरा शब्दहरूले झन् सकस नथपोस् । तपाइहरुका लागि मेरा शब्दहरू आगोका झिल्का नबनून्, शीतका शीतल थोपा बनून् !मैले यहाँ राजनीतिक... जारी राख्नुहोस...
भाद्र १९ । प्रेम भनेको यस्तो शब्द हो l जहाँ संसार अटेको हुन्छ । प्रेमलाई नत देख्न सकिन्छ, नत समात्न नै सकिन्छ केवल महसुस गर्न मात्र सकिन्छ l प्रेम भनेको सिक्काको दुई पाटा हो l जहाँ स्वार्थ र निस्स्वार्थ दुवै समावेश हुने गर्छ lजब मानिस प्रेममा पर्छ तब उनीहरू सोच्ने गर्छन् कि संसारलाई जित्ने शक्ति मात... जारी राख्नुहोस...
न पारी तर्न सकियो न वारी, सफलताको डुङ्गा बीच किनारमै अड्किरह्योः वृद्धाश्रमका एक वृद्धको बेथा
भदौ १७, विराटनगर । हिँउ सरी सेताम्मे छ कपाल । गाला चाउरीएर कुनै मूर्तीमा बुट्टा कुँदेझैँ अनुभूती हुन्छ । बिराटेश्वर वृद्ध आश्रमभित्र प्रवेश गर्दैगर्दा भेटिएका एक व्यक्ति ।हून त त्यहाँ आश्रीत सम्पूर्ण बा, आमाको कथाव्यथा आ आफ्नै थीए होलान् । किन किन ती चाउरीएका बाप्रति मेरो नजर एक्कासी गयो । तीजको दर... जारी राख्नुहोस...
पिण्डेश्वर बाबाधाममा हरितालिका तीज पर्वको रौनक
भाद्र १६, धरान । आज भाद्र शुक्ल तृतीया अर्थात् हरितालिका तीज । नेपाली हिन्दु नारीहरुले आज भगबान शिबको पूजाराधना गरी तीज पर्व मनाउँदैछन् । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिवपार्वतीको पूजा र उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रही आएको छ ।यसैक्रममा सुनसरीको एकमात्र शक्तिपीठक... जारी राख्नुहोस...